Foam namuhla amazinga kahulumeni ahlukahlukene lisetshenziswa kakhulu. Lokhu akusona isimanga, ngoba lokhu has eliphezulu a impahla amandla, kuyaqina, hypoallergenic futhi hygroscopicity. Nokho, nawu umbuzo: kuphi ukuthenga Foam nokuthi ukukhetha ke? Yiqiniso, umthengi ufuna ukubona anhlobonhlobo high amanani ezingabizi. Ngaphezu kwalokho, kuyoba ezifiselekayo okokusebenza engasindi futhi imvelo.
Lapho ukuthenga Foam, futhi ngayiphi?
Ngakho, uya wenze ukuthenga. Lapho ukuthenga Foam? Phela, okunezinhlobonhlobo lwanamuhla kude liphumile zangaphambi kwesithombe saso ukwehluka (ngokuya umbala kanye kwabantu, futhi isicelo). I amashidi futhi kuhluke ukujiya kanye kwabantu.
Kuyadingeka ukuba ichaze ngokucacile esifanayo, kuyini udinga ngaphambi kokunquma ukuthi ukuthenga Foam. Namuhla isetshenziswa ekwakheni, umkhakha ekukhanyeni, njengalokhu zokufaka impahla ngisho electronics.
Kafushane, lula futhi kuwusizo kakhudlwana ukuze usethe impahla izici kakhulu ayitholakalanga. It uyakwazi ukugcina izindawo zabo ngesikhathi aphansi kakhulu futhi, Ngakolunye uhlangothi, izinga lokushisa eliphezulu kakhulu, umelana kahle umswakama namathonya mechanical amandla ahlukahlukene ivala amplitude vibration.
By the way, udinga ukuthi ucabange nje kuphela mayelana kuphi ukuthenga amagwebu, ukucabanga kabanzi mayelana choice Foam imvuthuluka. Lokhu kwaziswa - ahlabayo, ngakho uphelele ngokugcwalisa amathoyizi elithambile, ifenisha, omatilasi, amacansi, njll Ngakho-ke, ukuze bakhokhe imali eningi amaqabunga lonke, kungase kungabi kunomvuzo ...
Nokho, ikhasimende ngalinye bazi lokho afuna. It uhlala kuphela ukunquma lapho ukuthenga Foam. E-Moscow, isibonelo, wenze ukukhetha kwakho ukunikela ezihlukahlukene izitolo namabhizinisi.
Bheka izinkampani owaziwa
Nokho, akubona bonke ngakho elula. Ungakhohlwa ukuthi ukuthintana owaziwa kakhulu kuphela, izinkampani ezimisiwe. Zama oyi-banake izibuyekezo zamakhasimende, lalela iseluleko abangane, nengangibajwayele, uma wena uqobo abazi lapho ukuthenga Foam. Ngo esitolo nge idumela ezingabazisayo ukwenza neze zinkulu.
Inkampani ezinhle kuyokusiza ukuba wenze ukuthenga inzuzo. consultant abanolwazi Bayophendula imibuzo yakho futhi kukusize wenze ukukhetha okufanele. Ngakho, impendulo sasivumela elula yalowo mbuzo, lapho ukuthenga Foam. Ngo eMoscow nakwamanye amadolobha Russian izinkampani seqiniso kukhona zingaphezu kokwaneleyo.
Ungakhohlwa kuphela umehluko material. Ngokwesibonelo, lo ukuqina we Foam yahlukaniswa supersoft, soft, medium, ukuqina yanda, superhard, latex, viscoelastic inkumbulo amaseli.
AmaSpredishithi futhi kuhluke ukujiya. Foam isakhiwo namangqamuzana encane nomoya. Ngakho, i-polymer iqina kungaba esikhulu, aphakathi nendawo, kanye esihle grained.
Okungukuthi, umehluko kwanele. Konke kuncike kulokho uludinga. Ngokwesibonelo, ethambile polyurethane foam kusetshenziswa eziyinkimbinkimbi futhi polyethers. ingasetshenziswa livela okokuqala womshini ifenisha upholstered, ngoba ngaphansi kwethonya umswakama ke ziyowa. Futhi uthanda eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ngakho-ke, kungcono ubonane onguchwepheshe.
Kunoma ikuphi, yokufuna eliphezulu impahla ngeke akudumaza, uma kuphela ngeke wazi kahle lapho ungathenga Foam. imikhiqizo emihle ngeke ukuqukatha ezinobuthi. Ngenxa Foam ezinjalo ngaphezu nenqwaba zako kuyoba ngisho nephephile empilweni yomuntu.
Futhi omunye ehilelekile oqondile. Eliphezulu Foam akuyona isikhunta. Lokhu kusho ukuthi akusiyo zavedutsya embhedeni izibungu.
Ngakho, singaphetha ngokuthini: ekhetha kuphi ukuthenga Foam, isicelo kubalulekile isidingo eyaziwayo inkampani. Lapha uzothola ukhetho olukhulu ishidi amagwebu, igwebu chips ka izinga ithatha eliphezulu elihlangabezana nazo zonke izimfuneko sanitary thola. Uyothola nakanjani akwazi ukuthola ncamashi okudingayo bese uthole izimpahla ngendlela elula kakhulu futhi inzuzo kuwe. Ngaphezu kwalokho, uma wazi ukuthi yini usayizi, ukujiya, ukuminyana, ukuqina, flammability udinga Foam, noma iyiphi inkampani self-ukuhlonipha kuzokuvumela ukubeka oda lakho ngocingo.
Khetha kuka ababambelela metal onesigqi
I-Holography i ... Umqondo, isimiso sesenzo, isicelo
Yini soleplate ezinhle? Yini yensimbi ukhetha?